Ihe nchocha nke Cat, Cat Tree Scratcher, Cat Toys - Jie Feng
Ihe Nlekọta Cat
Ngwongwo na-akpụ akpụ
Hangzhou Jie Feng Ntụrụndụ Product Co., Ltd Bụ A Professional Manufacturer Of Pet Products Na China na Emi odude ke Pingyao Town Of Hangzhou City.The Factory malitere na 2008 na Anyị Nwere Ọtụtụ Ahụmahụ Na The Pet Industry. Ihe Anyị na-achụ ugbu a bụ Unique Design na Best Quanlity N'ihi The Products.
ụlọ katọn cat
Anyị nwere ikikere nke anyị na ihe a. Emere ya na akwukwo eji eme enyi na ebe obibi anyi tinye mpempe akwukwo na elu ya na elu nke ihe a. Smellsì pụrụ iche nke kaadiboodu na-adọta nwamba ọtụtụ iji nwee ọ moreụ karịa. Ngwaahịa a bụ na nhazi usoro na obere njem njem ma nwee ike ịchekwa ụgwọ njem maka ndị ahịa. Kedu ihe ọzọ, ọ ga-ewetara ndị ahịa nghọta nke mmezu mgbe ha mechara nzukọ.
post cat ọkọ
Anyị nwere ikikere nke anyị na ihe ndị a. Emere ya Eco larịị EDF larịị. Anyị mere atụmatụ a na njedebe nke 2019 ma ọ na-ebili nnukwu uche na ngosipụta anụ ụlọ. Ọ na-ere nke ọma na 2020. Anyị mere ụdị dị iche iche na ọtụtụ agba maka ndị ahịa ịhọrọ, kwa, kaadiboodu corrugated bụ replaceable. E wezụga ọkọ ahụ, anyị na-agbakwunye ihe ụmụaka ji egwuri egwu ka ọ dịkwuo nwamba. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'usoro isiokwu a, biko kpọtụrụ anyị! Anyị nwere ike ịme omenala maka gị!
Ihe eji egwuri egwu MDF
Anyị nwere ikikere nke anyị na ihe a. Emere ya na eco-friendly elu mma E1 larịị MDF. Anyị na-ejikọta bọl na corrugate kaadiboodu ọnụ. Cat nwere ike ịkụ ọkọ ma kpọọ bọl. Tụnyere akwụkwọ scratcher toy, anyị mere ọzọ shapes nke usoro ndị a. N’akụkụ ọdịdị ndị a edepụtara atọ, anyị nwere ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Kedu ihe ọzọ, a ga-edochi mpempe akwụkwọ dị n'etiti bụ nke pụtara na ihe a na-adịgide adịgide. Ahịa naanị mkpa dochie etiti akụkụ nke dị ọnụ ala ma dị mfe ijikwa. Ọ bụrụ na ị ...
Ogige ndị na-akpụ akpụ bụ ụdị kabinet eji azụlite amphibians. Ndị ahịa nwere ike icho mma oche ha dịka nke ha si chọọ, ma wụnye oriọna na osisi iji mee ka anụ ụlọ ha nwee ezumike ka mma. Anyị na-eji mbadamba ndị nwere gburugburu ebe obibi wee nwee ike ịhazi nha dịgasị iche maka ndị ahịa anyị. Anyị na-ebupụ ngịga anụ ahịhịa na Europe na America, Australia yana ọ na-ere nke ọma oge niile. Nabata ajụjụ gị.
pusi mgbidi shelf SCW08-S
Emere ya Eco larịị EDF larịị. Anyị mere atụmatụ ahụ wee nata ọtụtụ ajụjụ na weebụsaịtị. Nkume mgbidi mgbidi bụ ụdị anụ ụlọ ejiji, nke nwere ike ịhapụ pusi nwere oghere egwuregwu. Ntughari otutu uzo kwesiri adabara maka ochicho nke cat. Ogidi eriri hemp ahụ nwere ike ịhapụ nwamba ahụ ka ọ chịa ụkwụ. Nhazi ahụ pụrụ iche ma dịkwa ọnụ ala. Ọtụtụ ndị ahịa akwadoro ma jiri ya kpọrọ ihe.
Adreesị:2-4 Yangcheng Okporo,
Obodo Pingyao, District Yuhang, Hangzhou
Ekwentị:86-187 5823 6742 / 86-178 2683 3264